Proton, iyo nyowani dhizaini, yakatovhurwa muFirefox 89 Husiku | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwaNdira tinotaura newe yekugadzirisazve iyo Mozilla iri kugadzirira yayo browser. Anonzi Proton, uye izvo zvinoitirwa kugadzirisa chimiro cheFirefox. Izvo zviripo parizvino vhezheni vhezheni inoratidza zvese zvakatsetseka, izvo zvinoreva zvakare kuti micheto ine maveti. Ichi chinhu chatisingaone mune iyo skrini iwe yaunayo pamusoro pemitsara. Uye kwete, sarudzo haina kuvhurwa nemaoko.
Zvamunoona ndizvo Firefox 89, kunyanya iyo husiku husiku. Kusvikira mazuva mashoma apfuura, zvese muv88 uye v89 beta isu tinokwanisa kumisikidza dhizaini nyowani kubva pamusoro: config, asi taifanira kuzviita pachedu. Ini handizive kuti sarudzo yekumisikidza yakaitwa riinhi, asi ini ndakagadzirisa yangu Yepedyo vhezheni muKubuntu, ini ndaona kuti dhizaini yachinja, ini ndatora pasi Nightly muManjaro kuti ndiisimbise uye, mukuti, isu tatova neProton .
Proton paFirefox 89 kana 90?
Kana vakasadzokera kumashure, Proton ichasvika mumasvondo mashanu uye mazuva mana, sezvo yakatsiga vhezheni yeFirefox 88 ichasvika neChipiri 20 uye masvondo mana gare gare ichasvika Firefox 89. Asi chinhu chimwe chinofanirwa kutariswa, kana zvirinani zviviri: Mozilla inochengetera kodzero yekuchengeta mamwe mabasa ayo ivo vari kuyedza muBeta uye Nightly shanduro, kadhi rechikara ravakatoshandisa muFirefox 87 pa kusasanganisira AVIF yekumisikidza kumisikidza mune enhau runyorwa. Chimwe chinhu chatinofanira kufunga nezvacho ndiyo nhamba yeiyo vhezheni, uye izvo ndezvekuti Proton ichave iri nani sechinhu chitsva mukutangisa kwekutanga mushure mekuchinja kwegumi.
Chero zvazvingaitika, ini ndinoona zvingangoita kuti Mozilla inosanganisira hutsva mu beta, inova yakagadzikana vhezheni kupfuura Husiku uye inogona kuda kushandiswa seye default browser. Pasina kudarika mwedzi tinogona kuve neyakagadzirwa nyowani inozochinja kero bar, iro rekushandisa, tab tab, hamburger menyu, mabara eruzivo uye kudonha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Tichava neProton kare muFirefox 89 kana kuti Mozilla yakamirira Firefox 90?
chakanyanya kushata chiri muna 90/91 mozilla anofarira kutora zvinhu nyore